Umshini opholile, Imbali Umshini opholile, Ukudla Umshini Cooler - ALLCOLD
Ukudla okusha sha
ISIPHUMELELO NEMISEBENZI YEKHwalithi EPHAKEME
I-ALLCOLD ingumholi womhlaba jikelele ekuxazululeni izixazululo nakuma-cooler wokukhiqiza wokukhiqiza
I-ALLCOLD ibhizinisi elisezingeni eliphezulu elinikezela i-R & D futhi linendawo engu-10,000m2 eDongguan China
IZIDLO EZIDUME KAKHULU
Isivinini sokupholisa esisheshayo, Kuthatha cishe imizuzu engama-30 ukupholisa kusuka ku-100 ℃ ukwehla kune-10 ℃. Ithempelesha yokuphola engafani maphakathi nendawo ebusweni bokudla. Azikho izidingo ezikhethekile ngosayizi, ukubukeka kanye nemodi yesitaki yemikhiqizo HAYI "ukungcola kwesibili" kokupholisa ekamelweni lensimbi elingenalutho eligcwele ngokuphelele. Ngokushesha weqa ibanga lokushisa elingu-25-50 ℃ elifanele kakhulu uhlobo lwama-bacteria. Ama-coolers we-AllCOLD wokuhlanza manje asetshenziswa kakhulu ekupholiseni kwe ...
Amamodeli Okupholisa Okupholile Nokucaciswa: Isici Esiphezulu Sokupholisa Isivinini sokupholisa okusheshayo. Ukudla okuphekiwe kupholile kweza ku-10 need kudinga kuphela ama-20-30, ukudla okuphekwe kupholile kwehle kube ngu-20 ℃ ngaphakathi ku-10-20min. Iyunifomu epholile.Ngaphansi kwesimo se-vacuum, ukudla kupholile kusuka emgodini kuye phezulu. Ukupholisa izigaba ezimbili ukunciphisa ukulahleka kwamanzi ekudleni. Kusukela ekushiseni okuphezulu kuye kuma-60 ℃, ukudla kuzopholiswa ngokushesha ukugwema ukukhula kwamagciwane ngokushesha, isitoreji sesibili sizokwehlisa ukupholisa ukunciphisa ukulahleka komphunga, nokwenza ngcono ukunambitheka kokudla. 4.M ...
Izinzuzo Zokupholisa ze-ALLCOLD? Indlela ye-1.Ultra-Fast yokupholisa ezungeze ama-20mins / umjikelezo. Isikhathi eside se-shelf-life by 2-3times. 3.Energy yokonga ngaphezu kuka-40%. 4. Ubuncane bencithakalo yemikhiqizo. Kungani usebenzise Umshini Ukupholisa? Uma sesivuniwe, konke okusha kuyangena ekucindezelekeni. Lokhu kucindezeleka kubangela ukuphefumula (ukuphefumula) kanye nokuphefumula (ukujuluka) okubangelwa ikakhulu ukushisa. Imifino yakho namakhambi akho kokubili ukuphefumula nokuphefumula kungancishiswa kakhulu ngama-cooler cooler ethu ngama-75% noma ngaphezulu. O ...
Inzuzo ye-Vacuum cooler (1) Gcina ikhwalithi enhle yama-turfs. (2) Isikhathi sokupholisa sifushane, imvamisa cishe imizuzu eyi-15- 20. Kuyashesha, kuhlanzekile futhi akukho ukungcola. (3) Ingavimbela noma ibulale ama-botrytis nezinambuzane.Ukulimala okuncane ebusweni bamakhambi nama-turfs 'kungalashwa' noma ngeke kuqhubeke nokwanda. (4) Umswakama osusiwe wenza u-2% -3% kuphela wesisindo, akukho ukomiswa kwendawo kanye nokuguqulwa (5) Noma kuvunwa ama-turfs emvuleni, umswakama ongaphezulu ungasuswa ngaphansi kwe-vac ...
Isici se-Vacuum cooler (1) Gcina imizwa nekhwalithi engcono kakhulu (umbala, iphunga, ukunambitheka kanye nezakhamzimba) wamakhowe! (2) Isikhathi sokupholisa sifushane, imvamisa cishe imizuzu eyi-15- 20. Kuyashesha, kuhlanzekile futhi akukho ukungcola. (3) Ingavimbela noma ibulale ama-botrytis nezinambuzane. (4) Umswakama osusiwe wenza u-2% -3% kuphela wesisindo, akukho ukomiswa kwasendaweni nokuguquguquka (5) Izinga lokushisa lomgogodla nobuso buyalingana. (6) Ngenxa yokupholisa kwangaphambili, ikhowe lingagcina isitoreji eside. Kungani sisebenzisa umshini c ...
Inzuzo Yokupholisa Umshini (1) Gcina ikhwalithi engcono kakhulu yamakhambi. (2) Isikhathi sokupholisa sifushane, imvamisa cishe imizuzu eyi-15- 20. Kuyashesha, kuhlanzekile futhi akukho ukungcola. (3) Ingavimbela noma ibulale i-botrytis nezinambuzane.Ukulimala okuncane ebusweni bamakhambi kungaphulukiswa noma ngeke kuqhubeke nokwanda. (4) Umswakama osusiwe wenza u-2% -3% kuphela wesisindo, akukho ukomiswa kwendawo nokuguqulwa (5) Noma kungavunwa amakhambi emvuleni, umswakama ongaphezulu ungasuswa unganakiwe. (6) iDu ...